Usoro oriri na ọ POSụ POSụ POS | Ebe ahia Waiterio nke ire ere
Usoro oriri na ọ POSụ POSụ POSEbe nrụọrụ weebụ ụlọ oriri na ọ Restauranụ .ụblogDocumentationỊnye ọnụahịadownloadsBanyeGbalịa ya ugbu a
Usoro oriri na ọ POSụ POSụ POSEbe nrụọrụ weebụ ụlọ oriri na ọ Restauranụ .ụ
blogDocumentationỊnye ọnụahịadownloadsBanyeGbalịa ya ugbu a
Mee ka afọ ju ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ gị
Waiterio na-eme ka ọ dị mfe iji jikwaa iwu nke ụlọ oriri na ọ restaurantsụ andụ na ụlọ mmanya
Jikwaa iwu ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ na usoro 4 dị mfe
Waiterio na-achịkọta ndị ọrụ ụlọ nri ebe ha na-enwe ezigbo nkwurịta okwu
Onye na-echere na-abanye n'usoro onye ahịa ahụ na ngwa Waiterio (dị na ngwaọrụ ọ bụla).
Onye siri nri na-akwadebe usoro a natara site na ngwa nbipụta nke ebe a na-ekpo ọkụ ma ọ bụ ihe ngosi kichin.
Onye siri nri bụ akara dị ka ihe dị njikere ma onye na-eche ya na-eweta ya na tebụl ndị ahịa.
Onye na-enye ego na-ebipụta akwụkwọ nnata na ịnara ego iji kaadị ma ọ bụ kaadị.
Can nwere ike ịkagbu ma rụgharịa ndenye aha gị oge ọ bụla ịchọrọ na ngwa ahụ. Gị niile data ga-adị mma.
Lelee ego dị n ’ụlọ ahụ wee chọpụta ụdị nri ndị dị n’etiti na -eme nke ọma iwezuga na menu.
Kpọọ ndị ọrụ ibe gị ka ha jiri Waiterio ya mere a na-ekerịta iwu na menu ngwa ngwa.
Mbipụta ọ bụla
Waiterio na-akwado ndị na-ebi akwụkwọ ọkụ. Imirikiti ndị asọmpi na-akwado naanị otu ma ọ bụ abụọ na-amanye gị ịzụta ngwaike dị oke ọnụ.
Waiterio na-enyere ịnata ịkwụ ụgwọ dị iche iche n'aka ndị ahịa na-eji ụzọ ịkwụ ụgwọ dị iche iche.
Ngwaọrụ ọ bụla
Nwere ike iji ya na tebụl, ama, igwe onyonyo, laptọọpụ na kọmputa desktọpụ. Waiterio na-arụ ọrụ na sistemụ arụmọrụ niile dịka Android, iOS, Windows, macOS na Linux.
Ndị ahịa obi dị ụtọ 305
Akaụntụ ọrụ 4125
Gbalịa usoro njikwa usoro a dị egwu n'efu. You nwere ike itinye ihe ruru 100 nyere kwa ọnwa ka ị na-eji sọftụwia a n’efu. Ngwa ahụ dị maka gam akporo, iOS, Windows, macOS na Linux. Nwere ike iji sistemụ ire a site na mbadamba ekwentị, ama, igwe onyonyo, laptọọpụ na kọmputa desktọpụ.
Ọ dị ngwa ngwa na kwụ ọtọ ma tinye ya na Waiterio POS maka ụlọ nri gị. Ihe ị ga - ebido bụ adreesị ozi-e na ngwaọrụ nwere njikọ internetntanetị.
Ndị ahịa anyị hụrụ anyị n'anya
Ngwa a nyeere obere cafe m na-agba ọsọ nke ọma.
Waiterio mma usoro usoro nri m. Nnukwu uru maka ego.
Ọ dị mfe ịhazi na nzaghachi dị mma. Ọbụna ndị osi nri nke ụlọ nri m na-amasị ya.
Ingnye ọnụahịa na-agbanwe agbanwe
Nwalee ngwa ahụ n'efu. Nwere ike itinye ihe ruru 100 kwa ọnwa ka iji ngwa ahụ n'efu. Can nwere ike denye aha na nke ọ bụla n'ime atụmatụ ndị a ka iwee karịa iwu:
100 iwu kwa ọnwa
Extra Obere$19kwa ọnwa
300 iwu kwa ọnwa
600 iwu kwa ọnwa
1000 iwu kwa ọnwa
1500 iwu kwa ọnwa
Extra Large$159kwa ọnwa
∞ iwu kwa ọnwa
Gụchaa ajụjụ ahụ
Wepụ yaamụma nzuzoOkwu & Ọnọdụ